Ujyaalo Sandesh | » ग्रीनकार्ड र पिआर ग्रीनकार्ड र पिआर – Ujyaalo Sandesh
ग्रीनकार्ड र पिआर
उज्यालो सन्देश December 1, 2020
दिदी विदेशमै सेटल भइसक्नुभएको थियो । म पनि श्रीमानसँग विद्यार्थी भिसामा विदेशमै थिए। आमाबुवा विदेश घुम्न आउनुभएको थियो । सुरुसुरुमा आमाबुवा यताको सफासुग्घर वातावरणमा रमाए पनि नेपालीहरूको दुख देखेर उहाँहरूलाई पटक्कै बस्न मन लागेन । पारिवारिक भेट थियो । हामीहरू दिदीकहाँ गएका थियौं ।
आमाले भिनाजुलाई हेर्दै सोध्नुभयो, ‘पिआर भइसकेको मान्छेको पनि हातभरि पोलेको र काटेको दाग हुन्छ त ज्वाइँ नारायण ?’
‘पिआर भयो भन्दैमा अर्काको देशमा बसीबसी खान दिन्छ त आमा ?’ भिनाजुले भन्नुभयो ।
‘नेपालमा अधिकृतको जागिर छोडेर आउनुभएको, पढेलेखेको मान्छे, यता पनि हेडसेफ भन्नुहुन्थ्यो त ? ठूलो पोस्ट होइन र ?’ आमाले सोध्नुभयो ।
‘आलो घाउमा नुन नछर्किनुस् न आमा । हेडसेफ भनेको खाना बनाउने भान्से हो ।’ अँध्यारो मुख लगाउँदै भिनाजु हाम्रो काम र पिआरको बारेमा सोध्न थाल्नुभयो।
किन हो, आमाको अनुहारमा आकाशमा काला बादल मडारिएझैं देखिन्थ्यो । मलाई औंंलाले देखाउँदै भन्नुभयो, ‘खेत बेचेर पढाएर विदेश उडाइयो, यता होटेलको बेड मिलाउदै छे ।’
’ अँ तिमी एज कियरमा काम गर्छु भन्थ्यौ । त्यता के काम गर्नुपर्छ ?’ दिदीलाई सोध्नुभयो ।
दिदीले भन्नुभयो, ‘बूढाबूढीको बच्चालाई झैं स्याहारसुसार गर्ने हो।’
आमाले असन्तोष ओकल्नुभयो, ‘अंश दिने सासूससुरालाई पकाएर खुवाउन परयो भनेर कति गुनासो गथ्र्यौ । सुख खोज्न देश छोड्यौ झन् यता यस्तो पो काम ? जे होस् डलरमा शक्ति छ ।’
‘सासूससुराको खेतबारी बाँझो नै छ । आफ्नै देशको माटो खने, डोको बोके बरु इज्जत कताकता । ठेला उठाएर कमायो यतैको सरकारलाई पोस्यो ।’ आमाले मेरो हात सुम्सुम्याउँदै सम्झाएर आफ्नै देश फर्कन कर गर्नुभयो ।
।’‘हुन त हो आमा तर पिआर नलिई नेपाल फर्किन लाज लाग्छ।’ म पीडा पोख्दै थिएँ ।
‘उता दाइ अमेरिकामा ग्रीनकार्ड भन्छ । बहिनीचाहिँ यता पिआर भन्छे । पिआर पाएको दिदीको हालत पनि छर्लङ्ङ देखिसकें । साँच्चै यो ग्रीनकार्ड र पिआर भनेको चाहिँ के हो ?’ आमाको प्रश्नले हल्लिखल्ली भएको कोठामा शून्यता छायो ।
सबैको चेहेरामा एक प्रकारको पीडा झल्केको आभास पाएँ । खुइय गर्दै मौनता तोडें र मैले भनें, ‘आमा, ग्रीनकार्ड र पिआर भनेको केही होइन, मात्र एउटा मानसिक रोग।’